Warbixinta Tartan & Tacliin: Goldogob Secondary fkf Buurtinle Sare iyo Waliba … – Radio Daljir
Warbixinta Tartan & Tacliin: Goldogob Secondary fkf Buurtinle Sare iyo Waliba …
Juunyo 8, 2017 3:13 b 1
Barnaamijka Tartan & Tacliin (T+T) oo sannad kasta bisha Ramadaan ka baaha Radio Daljir, galayna sannadkii sagaalaad, waxaa sannadkan mar kale idiin sahlay shirkada Golis Telecom iyo Shirkadda Towfiiq oo kaashanaya Dalladda PEN.
Tartan & Tacliin waxaa qaybta koowaad foodda isdaray dugsiyada kala ah Goldogob Sare iyo Buurtinle Secondary, kana mid ah dugsiyada sare ee Puntland, oo sannadkaan ay ku tartamayaan 30 dugsi sare.
Qaybta labaad ee T&T waxa uu asna ahaa tartan u dhexeeyey dugsiyada sare ee Cabdullaahi Ibraahin Ufeyn Sare iyo Jalam Secondary.
Hadaba Warbixinta barnaamijka Tartan & Tacliin ee caawa waxaa inoo haya wariye Xasan Heykal oo ku sugan Xarunta Daljir ee Bosaaso.
Wasiir Cali Cabdullaahi: “Balliga Gosol oo 4KM kor u Dhaafay waxaan u Iclaaminay Biyoxireen”
c/qadir birre 2 years
asc daljir masha allaah tartanku wuxuu ahaa mid cajiiba balse waxaan codsanayaah in su aalaha tartanku noqdaan kuwo isku dhawdhaw oo aan kala adkyn waad mahadsantihiin